Koofiyadda Barafka V06
Suufka raaxada laga saari karo,.
Lambarka Moodalka V06
Muuqaalka Qalabka istiraatiijiga ah ee xakamaynta Thermo, suufka dhegaha oo la dhaqaajin karo lana dhaqi karo. Suufka raaxada ee la dhaqi karo, Muuqaalka ku dhex jira
Koofiyadda barafka casriga ahi waxay isku daraysaa nidaamka hawo-mareenka xakamaynta qalabka hawada si loo maareeyo kuleylka xad-dhaafka ah ee loogu talagalay raaxada sare ee xaaladaha iyo xaaladaha kala duwan.
Fiisooyinka qolofta sare ee polycarbonate ee waara oo leh shaashad eps xarkaha xarkaha leh, ka dhig koofiyadda mid sii xoog badan, ka fudud oo soo jiidasho leh.
Suufka raaxada ee suuxdinta leh iyo suufka dhegaha ayaa u oggolaanaya mootooyinka inay dhaqaan ka dib markay dhowr jeer isticmaalaan. Noqo mid cusub oo nadiif ah, samee khibrad baraf ah oo farxad ka buuxo.
Midab qolof ah qaab-qolof ah, khariban, suufka suufka ayaa la siiyaa. Nala tali astaamaha la doonayo, adeeg hal-joogsi ah ayaa la bixin doonaa.
Hore: Koofiyad Baraf V09
Xiga: Koofiyadaha Iski lagu ordo V04
Koofiyad Baraf Jinni
Koofiyad Baraf Weji Leh
Koofiyadaha Barafka Wanaagsan
Koofiyad Barafka Fudud
Cod Koofiyad Baraf ah
Hadalka Koofiyadaha Barafka
Koofiyad baraf ah V10B